Tranga hafahafa :: Namoy ny ainy ity tovolahy nahafaty biby • AoRaha
Tranga hafahafa Namoy ny ainy ity tovolahy nahafaty biby
Tranga hafahafa toa tsy mampino no niseho teny Ankaditoho Marohoho. Nindaosin’ny fahafatesana, tamin’ny alakamisy lasa teo, ny tovolahy 18 taona, voalaza ho nahafaty biby tsy nahy. Tapa-bolana izay no naharariany ka izao nitarika tamin’ny famoizany ny ainy izao. Honohono, hatramin’izay, no nandrenesan’ny mpiray tanàna sy ny tompon’andraikitry ny fokontany ny tranga nahazo an’io tovolahy io. Voamarina izany taty aoriana.
Fandehandehanana teo amina toerana filalaovana baolina sy fahitana biby teo no niandohan’ny tantara. Niaraka tamin’ny namany iray izy, tamin’izay fotoana izay.
“Nahita biby izy roa lahy ireo ka nandaka sy nanipy izany tany anaty rano. Nitaraina ho narary tongotra havia ny ankizilahy iray, nony tonga tany an-trano. Niitatra tamin’ ny tongotra havanana sy tamin’ny kibony ary ny tanany ny fanaintainana. Nanomboka teo ny aretina hafahafa nahazo azy. Niezaka niala nenina ny fianakaviana. Nisy ny fandehanana teny amin’ny toerana nahitan’ireo ankizy ilay biby satria noheverina ho nisy fifandraisana tamin’ny aretina nahazo azy. Nanaitra ihany koa ny feo re fa nisy olona namoy ny ainy rehefa avy nanao maloto teo amin’io toerana io”, hoy ny loharanom-baovao.
Voalaza hatrany fa nijaly sy nirediredy, milaza ho nisehoan’ny olona tompon’ny biby, ilay tovolahy niharamboina, nandritra ny andro maromaro. Tsy nety sitrana izy ary niafara tamin’ny fahafatesany mihitsy izany.
Lozam-pifamoivoizana :: Namono olona indray ny lalambaovaon’i Tsarasaotra
Fahamaizana :: Rotiky ny afo ny rihana iray tamin’ ilay tranobe